Austria oo Militari dhigaysa xadka Talyaaniga, si loo hakiyo soo-galootiga – Kasmo Newspaper
Austria oo Militari dhigaysa xadka Talyaaniga, si loo hakiyo soo-galootiga
Updated - July 4, 2017 3:00 pm GMT
London (Kasmo), Xiisad ayaa ka aloosan xadka u dhexeeya Talyaaniga iyo Austria, ka dib markii Xukuumadda Vienna diyaarisay ciidan horjoogsada soo-galootiga ka imanaya dhanka Talyaaniga.
Wasiirka Gaashaandhigga Hans Peter Doskozil ayaa caddeeyay in dalkiisu diyaar u yahay hawlgalinta ilaa 750 militariga ah, si loo xoojiyo hakinta qulqulka soo-galootiga ka soo gudbaya Marinka “Brenner Pass”.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Talyaaniga ayaa looga yeeray Safiirka Austria ka jooga Rome, Rene’ Pollitzer, Xildhibaan Talyaani ahna waxay Guddiga Yurub ka codsatay in ay arrinta soo fara galiyaan, ciqaabna ka soo saaraan.
Marina Berlinghieri oo ka tirsan Xisbiga Pd (Partito Democratico), ayaa xustay in Austria ku xadgudubtay qorshihii dib u dejinta isla markaasna ku hanjabayso xiritaanka xadka, taas oo xadgudub ku ah xeerarka Yurub.
Midowga Yurub ayaa 2 toddobaad ka hor ka qaaday tillaabo ciqaab ah, dalalka Poland, Hungary iyo Czech Republic, kuwaas oo jabiyay heshiiskii lagu qaybsanayay 160,000 oo magangalyo-doon ah.
Ma ahan markii u horreysay oo Austria ku hanjabto xiritaanka xadka, laakiin hadal mooyee wali uma dhicin ficil ahaan. Dalka ayaa 15ka Oktoobar wajahaya doorashooyin wakhtigoodii ka soo hormaray, ka dib markii uu burburay isbahaysigii weynaa ee “Popular-ka” iyo “Socialdemocrat-ka”.
Hoggaamiyaha da’da yar ee Xisbiga Ovp, (Osterreichische Vokspartei), Sebastian Kurz, ayaa dhanka midig u janjeersaday, isaga oo mowqif adag ka qaatay soo-galootiga, si uu codad uga soo jaro Xisbiga Midigta fog, FPO (Freiheitiche Partei Osterrichs) ee Jorg Haider.
Dalka Switzerland qudhiisa ayaa adkaynaya xadka uu la leeyahay Talyaaniga ee Gobollada Woqooyi, Piemonte iyo Lombardia, oo Boliis fara badan lagu xoojinayo.
Sannadkii 2016kii mas’uuliinta Swiss-ka ayaa dajiyay qorshe lagu horjoogsanayo soo-galootiga oo oggolaanaya in ciidammada Militariga la gayn karo xadka, marka xaalad degdeg ah jirto.